Antoko MMM – 29 Marsa : « Nisaraka amin’ny vahoaka ny mpitondra… » | NewsMada
Antoko MMM – 29 Marsa : « Nisaraka amin’ny vahoaka ny mpitondra… »
Nanao fanambarana manoloana ny tranga niseho tamin’ny fanamarihana ny 29 marsa lasa teo teto an-drenivohitra ny birao politikan’ny Antoko Malagasy miara-miainga (A. MMM). Mbola nanamafy ny fitakiany hatrany izy ireo.
« Mazava indray izao fa nisaraka amin’ny vahoaka ireo mpitondra ka manao ny hifikirana eo amin’ny fitondrana fotsiny sady manosihosy ny hasin’ny firenena… Manoloana izany, miantso ny olom-pirenena izahay hitaky ny fahefana hisafidy ny ho mpitondra azy mialoha ny fotoana», hoy ny fanambaran’izy ireo afakomaly. Nomelohin’ity antoko naorin’Andrianainarivelo Hajo ity, ny fanakanana ny olom-pirenena, mizaka ny zo feno, tsy hanamarika ny 29 Marsa. « Midika ho fisarahana tanteraka amin’ny vahoaka sy ny tsy fahatokisana azy izany ary fanosihosena ny fahalalahana sy ny demokrasia », hoy ihany izy ireo.
Notsiahivin’ny A. MMM fa fihetsika mitovy amin’ireo nataon’ny mpanjanantany, nampiasa tafika sy mpitandro filaminana, mba hiarovana ny fitondrany ireny niseho ny 29 marsa teto an-drenivohitra ireny.
Sambany teo amin’ny tantara iny niseho ny 29 marsa iny
Nanterin’ny fanambarana fa tsy mbola nisy mihitsy mpitondra teto ka nandaroka vahoaka amin’ny vanim-potoana natokana hahatsiarovana ny tolona nataon’ireo tia tanindrazana. « Sambany teo amin’ny tantara ny nitifitra baomba mandatsa-dranomaso ireo olom-pirenena tsotra sy ireo olom-boafidy nandeha hametraka voninkazo eny amin’ny Fasan’ireo Maherifo ny mpitandro ny filaminana », hoy izy ireo.
Nohamafisin’ny A. MMM fa nampiasain’ny mpanjanaka ho herim-pamoretana ny vahoaka nitaky fahafahana ary notifirina sy natao vonomoka ireo nanao fihetsikeketsehana rehetra.
Nialoha ireo rehetra ireo, naneho ny fiondrehany am-panajana, mahatsiaro ny tolom-panafahana nataon’ireo Malagasy maro, nandritra ny fanjanahan-tany, indrindra ny 29 marsa 1947 ny Antoko MMM. « Marihina sy ilaina izany amin’izao fotoana mamparisarisa ny fihavanam-pirenena sy mampanjavozavo ny hoavin’ny taranaka fara mandimby izao », hoy ihany ny birao politika.